2 shirkadaha basaska waaweyn ee Brazil haatan aqbali Seeraar
Laba shirkadaha basaska Brazil, Traffic Garcia iyo South Brazil, in ay yihiin qayb ka mid ah group GSB ayaa kaliya noqotay shirkadaha gaadiidka rakaabka ugu horeysay ee Brazil si ay u aqbalaan cryptocurrency sida habka lacag bixinta.
Kooxda ayaa markii hore doortay inuu kaliya isticmaali Seeraar, laakiin qorshaynaysa in ay dar Litecoin by July.
"Hawlgallada dhaqaalaha iyo ganacsiga badan ayaa soo guuray dunida digital, iyo qeybta gaadiidka rakaabka wadada waa ka duwan yahay no "ayuu yidhi madaxweyne ku xigeenka GSB Group Estefano Boiko Junior.
Shirkadaha gaadiidka waxay bixiyaan safarada ka mid ah magaalooyinka iyo sidoo kale safarada gaarka ah ee dugsiyada, kooxaha, shirkadaha iyo dalxiisyada.
habka lacag bixinta cusub waxaa laga heli karaa bogga internetka ee shirkadaha basaska, via Boos online kaliya, iyo tigidhka waxaa loo diri doonaa email macaamiisha ah ee sida xaqiijinta bixinta.
500 000 qof oo ku nool Switzerland u codeeyay Seeraar oo kale ah nidaamka maaliyadeed
Olole ay si mitidnimo ah inayna warshadaha dhaqaale Switzerland ee wax u eg nidaamka dhaqaale Seeraar ayaa dushaan badiyay shalay - waxaa u suurtagashay in ay ku guuleysato dhow 500,000 votes, ku dhowaad 25% dadka suaalaha.
Qorshaha ayaa waxaa muran - yaqaan Sovereign Money Initiative - arki lahayd bangiyada ganacsiga ka elektaroonig ah abuurista lacag mamnuucay markii ay wax amaahisaan ka baxsan kayd ay.
“Cryptocurrency iyo blockchain uusan u eg, halkaas oo aan cinwaan. Waxaa laga yaabaa in lagu isticmaalay hoos nidaamka naloo soo jeediyay,” ayaa sheegay in Emma Dawnay, xubin guddiga ka mid ah Momo, kooxda oo soo jeediyay Sovereign Money Initiative.
Lacagta Digital Goes Mainstream la DasCoin
Report Kraken Daily Market for 10.06.2018
$233M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Exchange Eidoo Hybrid
Eidoo keentaa Hybri a ...
Bank of Kanada noo ...
York sarrifka Genesis ...
Post Previous:saddexaad Jarmal kasta aragto cryptocurrencies sidii maalgashi
Trevor Moede ayaa sheegay in:
leon ayaa sheegay in:
letak ayaa sheegay in:
marc ayaa sheegay in: